China PROTMEX PT202A Digital 12V - 1000V AC Voltage Detector Non Contact Tester Pen Volt Current Electric Test Pencil ifektri abakhiqizi | Ukuphrinta
I-PROTMEX PT202A Digital 12V - 1000V AC Vol ...
I-PROTMEX PT19D Digital Hygrometer Indoor Thermom ...
I-PROTMEX PTH-5 Wall Mount Digital Carbon Dioxide ...
Umkhiqizo ungalinganisa amandla kagesi
Amandla wokusebenza: I-AC Voltage: 12 ~ 1000V (50 / 60Hz);
Ukuzwela okuphezulu: 12 ~ 1000V;
Ukuzwela Okuphakathi: 48 ~ 1000V;
Ukuzwela okuphansi: ukuhlukanisa okubukhoma nokungathathi hlangothi;
Ithempelesha yokusebenza: 0 ~ 40 ℃,
Ithempelesha Yokugcina: -10 ~ 50 ℃;
5.Umswakama: ≤ 85%;
6.Ibhethri: 2 x 1.5V AAA
1. Umkhiqizo wenziwe ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme futhi unesimo sakudala;
2. Izwela futhi inembile ngesilinganiso;
3. Encane ngosayizi nokukhanya kwesisindo, okulula ukukuthwala;
4. Simple ukusebenza futhi kulula ukuyisebenzisa
Isitifiketi esibalulekile: CE / RoHS / FCC
Amandla wokukhiqiza aqinile: Isikhathi sokukhiqiza izinsuku eziyi-15 ~ 30
Yiba namandla ocwaningo nentuthuko: Imikhiqizo yenzelwe futhi yathuthukiswa yithi uqobo
Umugqa Wethu Wokukhiqiza
Q: Iyini i-MOQ yakho? Isikhathi sokuhola?
A: Asinayo i-MOQ kuyo yonke imikhiqizo, i-1 PC nayo ilungile. Cishe yonke imikhiqizo isesitokisini sokuthunyelwa okusheshayo, imvamisa izinsuku ezi-3 zokusebenza, kepha kwesinye isikhathi imininingwane ephathekayo izobambezeleka.
Q: Uyayamukela insizakalo ye-OEM / ODM?
A: Kokubili i-OEM ne-ODM zamukelwa kakhulu inqobo nje uma uhlangabezana ne-MOQ yethu futhi sithanda ama-oda afana ne-OEM ne-ODM ngoba ubuningi bukhulu futhi amaklayenti azinzile.
Q: Iyini insizakalo yakho yangemva kokuthengisa newaranti?
A: Iwaranti yethu ingunyaka owodwa futhi singakulungisela mahhala ngaphakathi kwewaranti inqobo nje uma inkinga ingenziwanga uqobo. Uma izinkinga zomuntu siqu futhi ngaphandle kwewaranti umthengi kufanele akhokhe imali yokuthumela kanye nemali yokulungisa uma kudingeka.Izinto ezincane singathumela ukukhishwa kwamahhala ngokulandelana okulandelayo.
Q: Uyini isikhathi sakho sokukhokha kanye nebhizinisi?
A: Ungasikhokhela nge-paypal, wechat, ukudluliswa kwebhange, noma iyiphi indlela ilungile, ngoba isampula esivame ukuyithumela ngokuzwakalayo njenge-DHL, i-EMS, i-UPS, i-Fedex, i-Aramex njll, ukuthunyelwa kolwandle nokuthunyelwa kweloli konke kulungile. , FOB, EXW, DAP, CIF konke kwamukelwa.
Q: Singakuthemba kanjani futhi sikuthola kanjani uma ungathumeli umkhiqizo?
A: SiseNanShan District, eShenzhen, ungacela noma yimuphi umngani waseChina ukuthi asivakashele. Ngemuva kokuthi kufakwe i-oda lakho, uma singathumeli ngesikhathi, ungakhalaza kithi. Uma ukhokha nge-escrow noma i-paypal, kuphephe nakakhulu. Ungasithola ngewebhusayithi / nge-imeyili nganoma yisiphi isikhathi (amahora angama-24 * izinsuku eziyi-7), uma singaphenduli ngesikhathi esingalala ngaso ebusuku, sizokuphendula ngokushesha.
Q: Ungafaka kanjani i-oda?
IMP: Ungakhetha imodeli nobungako obufunayo, bese sihlola imali yokuthumela bese sikuthumela i-invoyisi kaProforma oyikhokhile. Ukukhokha ku-inthanethi ngokudluliswa kwamabhange kwehlisiwe, okunye futhi KULUNGILE. Ngemuva kokuthi usikhokhele sizokuthumela ngqo ekhelini lakho, bese ukhokha ukuthola izingcingo ezivela ku-express yasendaweni ukukhokha intela uma kudingeka, ngemuva kwalokho zikulethele. Sicela ungakhohlwa ukusinika impendulo uma wenelisekile ngomkhiqizo nangensizakalo yethu.
Langaphambilini I-PROTMEX PT19D Digital Hygrometer Indoor Thermometer Ithempelesha kanye ne-Humidity Gauge Monitor Inkomba Igumbi Le-Thermometer